Deep Drawing Cookware Aluminium Circles 1000 Series Korrosion Resistance - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
1.Alloy 1060 Aluminium raki-peo, haingam-pahaizana lalina, hatsaran-tarehy tsara, tsara tarehy ary manamboninahitra, tsy manan-tsofina efatra;
2.Excellent fitaratra, tsara ho an'ny polisy;
3.Good kalitao anodized, mety ho anodizing mafy sy ny eameling;
4.Olaingitra sy ravin-kisoa, tsara kalitao, voankazo tsara ary rehefa manisy lalotra tsy misy fefy;
5.Excellent pearl colour anodizing.
Ny aliman-koditra avo lenta antsoina hoe aluminium dia azo ampiasaina amin'ny famokarana varimbazaha varimbazaha isan-karazany, toy ny fanodinana zezika tapaka lalina, manatsara ny kalitaon'ny fitaovana ambioka, ho an'ny alim-bary tsy mofomamy tsy mafana, tsy misy tapa-kazo, ho an'ny non-stick, ho an'ny kitchenware sns.
Ny aluminium ny alim-borona misy ala misy karazany maromaro, toy ny grady 3003, AA 1050, ny legioma 1070 A1050 O, AA 1100 3003 1060 1200 HO legioma, koa manana AA3003 haingam-pitodika ny kalitaon'ny kalitao henjana mafy, ny legioma 3003 DDQ henjana anodizing, ny 3003 H12 3003, 1100 O ny hatsaran'ny kalitao mafy, 3003 1100 anodized ny kalitao, ny legioma XNUMX HO kilao sns.
1050 Alim-bary manodidina ny alika, fitaovana fisakafoanana, fitaovana, koveta, Kitapo fikarakarana. Hobe Aluminium no mpamokatra ny alim-pitobian'ny alimo. Ny orinasanay dia ao Zhengzhou, Henan. Ny faribolan'ny alim-by dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaovana ny alikaola, toy ny fanala alimo, pizza pan, fitaovana fampiasa. Ara-dalàna raha matevina amin'ny 0.3mm - 6mm, diameters avy amin'ny 80mm-980mm. Aorian'ny fandrosoana taona dia manana ny tanjom-pamokaran-dalantsa sy ny marketing ara-barotra izahay.
Miaraka amin'ny fanampian'ny ekipa manam-pahaizana manokana, dia mikasa ny hanamboatra sy hanolotra faran'ny Aluminium Circle.
Ny tolotra Industrial Aluminum Circle dia novolavolaina tamin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana avo lenta tsara indrindra amin'ny fanarahan-dàlana amin'ny fenitra indostrialy efa voafaritra. Afaka manararaotra ireo faribolana Aluminium Indonezika ireo ny mpanjifa araka ny filazan'izy ireo, amin'ny vidiny mahasoa.
1. Tsy misy marika na horonan-tsarimihetsika eo amin'ny elatry ny circle aluminium / disk / disc.
2. Tsy misy rano mangatsiaka eo amin'ny faritra.
3. Ny rindrin'ny alim-borona / disk / disk dia madio tanteraka raha tsy misy loto.
Shuanglin Jiate ny lanjan'ny avo lenta indrindra amin'ny diamondra sy ny hateviny isan-karazany, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana an-trano toy ny fitaovana fanenomana, tsy fisakafoanana ary fitaovana fambolena hafa. Ireto ambany ireto ireo refy sy fepetra izay manomeza faribolana
Product Aluminium Circle / Aluminium discs
6061, 8011 tezitra O,H12,H14,H16,H18,H22,
hateviny 0.3mm-8.0mm savaivony 30mm-1200mm
fampiharana DC Quality (Deep Drawing) CC Quality
• tavoahangy tavoahangy • Fonosana vita amin'ny menaka
• Kitapo kesika • Fanaterana fanodinana
• Toerana fisotroan-divay • Rice cookers
• urns kafe • fitaovana elektronika
• Toeram-pisakafoanana ara-barotra
• Bakeware, Mpanao mofo
• Takelaka tsangambato tsy manara-penitra • Ny vilany
• Lighting aloha
• Birao avoan'ny indostria
• Fiarovana amin'ny tsindry
• Fanondroana ny hazavana
Ny fiara, ny fanidiana, ny Pan, ny fitaovana fikarakarana sakafo, ny fitaovana famokarana sakafo, ny fitaovana fitahirizana, ny kamiao ary ireo fitaovana fanofanana, ireo mailaka, ny fitaovana fiaramanidina, ny chassis elektronika, ny boatin-dalamby, ny trano fonenana, ny fonony, ny fanontana, boaty fitaovana, kamiao kamiao, vata anatiny sy ivelany ao anaty fiara sy ny indostrian'ny fiara, fitaovana fikarakarana lakozia, trano fandroana, fampiasana architectural, fampihetseham-peo.
Kitapo mofomamy mafana na mangatsiaka miloko mavo / kofehy vita amin'ny alim-borona
Kodiaran'ny alim-bodiakoho vita amin'ny alim-bary efa simba
kodiarana Aluminium ho an'ny pans, Ddq Aluminum Circle Cookware, Fonosana Aluminium Deep, Kitapo fidiovana aluminium
Aluminium Aluminium Material Aluminium Round Plate
Vidiny azo vidiana 1050 H14 Aluminium Circle / Sheet